Home News Samaynta Fatahaada webiga Shabeelle oo korortay iyo Caruur ugeeriyootay fatahadaa
Samaynta Fatahaada webiga Shabeelle oo korortay iyo Caruur ugeeriyootay fatahadaa
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in labo Caruur ah ay ku geeriyoodeen ka dib markii ay uu qaaday Wabiga Shabeelle oo ku fatahay Xaafado ka mid ah Magaalada Beledweyne.
Labadda Carruurta ah ayaa la sheegay in wabiga ay raacdeen markii hore, islamarkaana ay horay u qaadeen daadadka Wabiga.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa gurmad ka Wadda Magaalada Beledweyne oo Xaafado badan oo ka mid ah ay go’doon yihiin.
Sawiro laga soo qaaday Goobaha uu Wabiga uu ka fatahay ayaa muujinayey Biyo farabadan oo yaalla Suuqa Khudaarta lagu Iibiyo iyo xaafadaha qaar ee Magaalada Baladweyne.
Goobaha Ganacsi ee Magalada Baladweyne ayuu saameyn ku yeeshay fatahaada Wabiga,waxaana gebi ahaan saakay xiran Suuqa Khudaarta ee Magaalada baaldweyne.
Guddoomiyaha Gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale ayaa shalay sheegay in fatahaada Wabiga Shabeelle ay ka barakaceen in ka badan 50 Kun oo Ruux,sidoo kalena laga cabsi qabo in dad kale ay barakacaan.